Student Council Meeting 03/19/21 @ 6:30
Xarumaha Bulshada Jamaica Plain Barashada Dadka Waaweyn
Barnaamijka (JPCCALP) waa habka ugufiican ee lagu kobcin karo xirfadahaaga Ingiriisiga, xisaabta, aqrinta, iyo qoraalka, oo horumar laga gaaro yoolalkaaga. Waxaan bixinaa maalin lacag la'aan ah, fiidkii, iyo xiisado internet ah oo ku habboon dadka waaweyn ee mashquulsan. ALP waa barnaamij adeeg oo buuxa halkaasoo ardaydu ka bilaabi karaan heer kasta oo ay uga sii gudbi karaan heerarka ugu sareeya.
Bartayaasha cimriga dheer waxay helayaan xirfadaha aasaasiga ah ee ay ugu baahan yihiin sidii ay uheli lahaayeen Horumarinta Waxbarashada Guud (GED), galaan barnaamijyada tababbarka shaqada, iyo inay codsadaan waxbarasho sare iyo fursado shaqo.
qaadan fasalada muhiimka ah
Qaado xiisadaha kumbuyuutarka
hel xirfad iyo latalin kulliyadeed
u hel umeerin
qaado fasalada dhalashada
isku diyaari si aad u hesho GED
Ku soo dhowow barnaamijka barashada dadka waaweyn
Macluumaadka aad ubaahantahay inaad guuleysato
Anaga oo ku hadlaya magaca kulliyadayada, shaqaalaha, iyo maamulka, waxaan kugu soo dhaweynayaa Barnaamijka Barashada Dadka Waaweyn ee Xarumaha Bulshada Jamaica Plain.
Haddii aad tahay arday ku cusub ama ku soo laabanaya Barnaamijka Barashada Dadka Waaweyn, waad ku wanaagsan tahay wadada aad ku gaadhayso yoolalkaaga waxbarasho iyo meheradda. Hambalyo go’aankaaga ah inaad sii wadato waxbarashadaada. Go'aankani waa mid muhiim u ah noloshaada iyo meheraddaada waana mid u baahan dadaal iyo waqti aad qayb ka tahay. Fadlan ka faa iidayso barnaamijyadeena, oo waqtigan u isticmaal si aad ugu korto shaqsi ahaan, caqli ahaan, iyo xirfad ahaanba. Kulliyad, shaqaalaha, iyo maamulka ayaa halkan u jooga inay kaa taageeraan inta waxbarashaddaada iyo waqtiga aad nala jirto.
Websaydhkan waxaa ku jira macluumaadka aad ugu baahan tahay inaad xubin guul leh ka noqoto Xarumaha Bulshada Barnaamijka Jamaica Plain Community Learning Program. Boggan websaydhka waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan barnaamijyadeena iyo siyaasadahayaga, iyo sidoo kale ilo waxtar leh oo bulshada ka heli kara kordhinta barashadaada. Fadlan qaado waqti aad si taxaddar leh dib ugu eegto degelkan. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan nala soo xiriir annagana waan ku caawin karnaa.
Fadlan firfircoonow qayb kasta oo ka mid ah waxbarashadaada. Waxaan diyaar u nahay inaan kaa caawino gaarista himilooyinkaaga.
Maamulaha Barnaamijka Barashada Dadka Waaweyn
Barnaamijka Jamaica Plain Community Center Xarumaha Barashada Dadka Waaweyn (ALP), oo qayb ka ah bulshada Jamaica Plain ilaa iyo 1982, waxaa loo aasaasay iyada oo laga jawaabayo baahida waxbarasho aasaasiga ah, dhisida xirfadaha la xiriira shaqada iyo adeegyada ESOL ee dadka waaweyn ee deegaanka. Waqtigaas, ALP waxay bixisay waxbarasho bilaash ah, xirfad-xirfadeed, iyo adeegyo kale oo taageero ah oo loogu talagalay dadka waaweyn ee dakhligoodu hooseeyo iyo kan dhexdhexaadka ah illaa 5400 bartayaasha waaweyn. Sanad kasta, waxaan u adeegnaa 400 oo qof oo waaweyn, laga soo bilaabo 18 sano iyo wixii ka sareeya.
Ujeeddada ALP waa in la bixiyo hal abuurnimo bartilmaameed-ku saleysan, barnaamijka waxbarashada ka qeybqaadashada dadka waxbarasha ahaan liidata iyo Xaddiga Aqoonta leh ee Ingiriisiga Xaddidan. Hadafkayagu waa inaan ka caawino ardayda inay gaaraan waxbarashada, xirfadaha, iyo isku halleeynta taas oo u oggolaan doonta inay si buuxda uga qeybgalaan bulshooyinkooda iyo waxbarashada carruurtooda, taasina waxay sii kordhin doontaa fursadaha horumarka shaqsiyeed, waxbarashada cimriga dheer, iyo isku filnaasho dhaqaale. Iyada oo taas laga duulayo, waxaan bixinnaa aaladda si loogu suurto geliyo taarikhda shakhsiyaadka iyo kooxaha inay si buuxda u helaan, uga faa'iideystaan, uga qeybqaataan, iyo saameyn ku yeeshaan kheyraadka iyo horumarka beelkooda.
The ALP Student Council
Fabian Lira, Student Council President..more